သန္ဓေတည်ခြင်း – BurmeseHearts
အမျိုးသမီးတွေအတွက် ရာသီမှန် ၊ မမှန် ဘာကြောင့် သတိထားသင့်သလဲ? ရာသီမပေါ်တာ ဘာကြောင့်လဲ? ကိုယ်ဝန်ရှိရင် မူးလဲကျပြီး ပျို့အန်လေ့ရှိသလား? ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေရှိနေရင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်သလဲ? ရာသီလာရပ်ဆိုင်းခြင်းဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ? ပျို့၍ အော့အန်ခြင်းဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ? ရင်သားကြီးထွားလာခြင်းဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ? မကြာခဏဆီးသွားခြင်းဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ? ကိုယ်ဝန်ရှိ ၊ မရှိ သိဖို့ ဆီးစစ်ကိရိယာဖြင့် ဘယ်လို စစ်ဆေးကြည့်နိုင်မလဲ? ဘယ်အချိန်ကစပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိတာကို စမ်းသပ်သိနိုင်မလဲ? ဆီးစစ်ကိရိယာနဲ့ မှန်မှန် ကန်ကန် စမ်းသပ်နည်းဆိုတာ ဘာလဲ? ဆီးစစ်ကိရိယာမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိ ၊ မရှိ ဘယ်လိုသိရှိနိုင်မလဲ? ဆီးစစ်ကိရိယာဟာ အဖြေမှားထွက်တတ်သလား? သားအိမ်ခြစ်ထားတဲ့သူနဲ့ သားပျက်တဲ့သူတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်လက္ခဏာပေါ်တတ်သလား? ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်း စမ်းသပ်ရရှိချက်တွေ ဘာကြောင့် မတူရသလဲ? တကယ်ပဲ မိမိမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိသလား? ကလေးမွေးဖွားမည့် ခန့်မှန်းရက် (estimated due date)ကို ဘယ်လိုတွက်ပြီး သိနိုင်မလဲ?
သန္ဓေတည်ခြင်း နဲ့ ပတ်သက်လို့ CHAT Room မှာ ဝိုင်းဆွေးနွေးမယ်။
ပြီးရင် သန္ဓေတည်ခြင်း နဲ့ပတ်သက်လို့ အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးဖို့ ဒီပေ့ခ်ျကို ပြန်လာရပါမယ်။